Apple dia hamolavola ny Apple Car amin'ny toerana iray any Alemana | Avy amin'ny mac aho
Miresaka momba ny Apple Car indray izahay, tsara momba ireo tsaho manodidina ny fiara ho avy kasain'i Apple hapetraka eo an-tsena eo anelanelan'ny taona 2019 sy 2020. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nampahafantarinay anao ny codename izay raisin'ireo fotodrafitrasa ampiasain'i Apple hampivelatra ny fiara ho avy ny orinasa, nomena anarana taorian'ny angano grika. Saingy anio isika dia hahita momba ireo fotodrafitrasa heverina fa ananan'i Apple any Alemana ary aiza no toa mamolavola ampahany amin'ny haitao izay hampiasain'ny Apple Car na izay iantsoana azy amin'ny farany.
Toa miasa i Apple amin'ny laboratoara fikarohana sy fampandrosoana miafina ao afovoan'i Berlin, hoy ny famoahana alemà Frankfurter Allgemeine Zeitung, fantatra amin'ny anarana hoe FAZ. Ireto fitaovana ireto tsokosoko Hanana olona ambaratonga 15 sy 20 avo lenta izy ireo izay niasa teo amin'ny sehatry ny fiara mihodina Alemanina ary eo no ahitantsika ireo injenieran'ny rindrambaiko, manam-pahaizana momba ny fitaovana sy ny varotra.
Ireo mpiasa izay ao amin'ny sehatry ny asa, dia raisina ho mpandinika miandalana amin'ny sehatra misy azy avy ary miombon-kevitra amin'ny hevitra momba ny fanavaozana izay narahin'i Apple tato anatin'ny taona vitsivitsy izy ireo, ireo mpiasa nandao ny asany teo aloha dia reraky ny hevitra mpandala ny nentin-drazana noterena hanaraka.
Nilaza koa ilay boky fa ity fiara Apple voalohany ity dia mety tsy ho herinaratra, saingy voalaza ihany koa fa ity fiara ity dia tsy hanana fiara mitokana, farafaharatsiny mandritra izao fotoana izao, toy ny fiaran'ny Google na mitovy amin'ny fiasan'ny Tesla taorian'ny fanavaozana farany azony. Tsy hanana an'io haitao io satria toa Apple mbola hampivelatra an'io haitao io. Nolazainy ihany koa fa ny maodely dia hitovy amin'ny BMW i3, maodely iray izay toa loharanom-pahalalana ho an'i Apple foana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Apple dia hamolavola ny Apple Car amin'ny toerana iray any Alemana
Raha toa ka mivoaka toy ny iOS 9 izy dia mandehana.
Smartphone SE iPhone vs "Minis"